Tag: kajy | Martech Zone
Friday, May 14, 2021 Alakamisy, Jona 2, 2022 Douglas Karr
Tamin'ny podcast vao haingana niaraka tamin'i Marcus Sheridan, niresaka momba ny paikadin'ny tsy fahombiazan'ny orinasa izy ireo rehefa mampivelatra ny ezak'izy ireo amin'ny marketing nomerika. Azonao atao ny mihaino ny fizarana iray manontolo eto: lakilem-pifandraisana iray niresahany rehefa manohy mitantana ny dian'ny mpanjifany ny mpanjifa dia ny atiny ifanakalozana. Marcus dia nanonona karazana atiny fifandraisana telo izay ahafahan'ny fitarika-tena: fandaharam-potoana manokana - ny fahaiza-manao manangana ny
Friday, May 14, 2021 Thursday, June 2, 2022
Calculator: kajy ny haben'ny santionany farafahakeliny
Alakamisy, Aprily 22, 2021 Alakamisy, Aprily 22, 2021 Douglas Karr
Ny famolavolana fanadihadiana sy ny fahazoana antoka fa manana valiny marina ianao mba hahafahanao miorina amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasanao dia mitaky fahaizana kely. Voalohany, mila mahazo antoka ianao fa ny fanontanianao dia apetraka amin'ny fomba izay tsy mitongilana ny valiny. Faharoa, mila mahazo antoka ianao fa mandinika olona ampy hahazoana valiny ara-statistika marina. Tsy mila manontany ny olona rehetra ianao fa ho be asa io ary lafo be. Orinasa mpikaroka momba ny tsena
Calculator: maminavina ny fiantraikan'ny hevitrao amin'ny Internet amin'ny varotra
Alarobia, Martsa 31, 2021 Alakamisy, Aprily 1, 2021 Douglas Karr
Ity kajikajy ity dia manome fisondrotana na fihenan'ny varotra arakaraka ny isan'ny hevitra tsara, hevitra ratsy, ary hevitra voavaha ananan'ny orinasan-tserasera. Raha mamaky izany amin'ny alàlan'ny RSS na mailaka ianao dia tsindrio ilay tranokala hampiasa ilay fitaovana: Raha mila fanazavana momba ny fomba namolavolana ilay paikady, vakio eto ambany: Formula ho an'ny fivarotana efa nambara mialoha avy amin'ny Online Review Trustpilot dia sehatra fandinihana an-tserasera B2B hisamborana ary fizarana hevitra ho an'ny daholobe
Inona no teknolojia nesorina tamin'ny smartphone?
Miakatra amin'ny tsingerintaona faha-10 an'ny iPhone izahay, natomboka ny 29 Jona 2007. Toy ny psychopath maharesy lahatra rehetra, ny smartphone dia afaka mametraka eo alohan'ireny. Sariaka izy ireo, manampy ary toa tsy handratra lalitra. Mandritra izany fotoana izany dia mpamono olona mampalahelo izy ireo izay manisy famantaranandro fanairana amin'ny torimasony ary manome antoka fa tsy ho hita intsony ny rafitra GPS anao. James Pelton Mety ihany raha mandefa an'ity sary mpamono olona ity ny Mobile Text Alerts:
Inona ny vidin'ny Konferansa malemy?
Alakamisy, Jolay 23, 2015 Alakamisy, Jolay 23, 2015 Jenn Lisak Golding
Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no niantso antso tamin'ny kaonferansa izay nandany fotoana be fotsiny. Na rindrambaiko glitchy, mpanolotra tsy voaomana, na loza am-peo, mandany fotoana sy loharano be izany. Ary azo antoka fa tsy manampy izany rehefa mahatsapa aho fa mihoatra ny 30 isan-jaton'ny fotoana izao. Ny fivoriana rehetra — amin'ny Internet na an-trano — dia fampiasam-bola ataon'ny orinasanao amin'ny fotoana sy vola ary enti-miasa. Na mihodina io fampiasam-bola io
Thursday, July 23, 2015 Thursday, July 23, 2015